ဆောင်းလူ – အနောက်ကမ္ဘာက ရော်ဘဲကြီးများသုို့ပေးစာ … | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းလူ - စားကောင်းရုံလုပ်ကြတဲ့ လောကကြီး (၂)
ဆောင်းလူ - ကျွန်
ဆောင်းလူ – အနောက်ကမ္ဘာက ရော်ဘဲကြီးများသုို့ပေးစာ …
အနောက်ကမ္ဘာက ရော်ဘဲကြီးများသို့ ပေးစာ …
အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃
အနောက်ကမ္ဘာက ရော်ဘဲကြီးတို့ရေ ….
ခုတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း ဒုက္ခ …. ဒီမိုကရေစီကို ဖင်ခုထိုင်ထားတဲ့ ခင်ဗျားတို့ အနောက်ကမ္ဘာကြီးမှာ ခုတော့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်ခံနေရပြီ …။ ပါးပါးလေးပါ… ရော်ဘဲကြီးတို့ရေ … တကယ်ဆို ကျူပ်တို့နိုင်ငံမှာက ရှိပြီးသားဗျ …။
နည်းပညာ မကျွမ်းကျင်လေသလား … မလုပ်ချင်လို့ပဲလားတော့ မသိဘူး …။ ကျူပ်တို့နိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီး စပိုင်ရှိတယ် …။ ကျောင်းသား စပိုင်ရှိတယ် …။ သူ့လူ ကိုယ့်ဘက်သား စပိုင်ရှိတယ် …။ သူတို့ကိုထောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုပြီး ခင်ဗျားတို့ဆီကလို ဆန္ဒတော့ သွားမပြလိုက် လေနဲ့ …။ ထောင်တွေကလည်း နိုင်ငံတလွှား အနှံ့အပြားပဲဗျာ …။ ထောင်ထဲတောင် အကောင်းပကတိအတိုင်း သွားရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ …။
ရော်ဘဲကြီးတို့ရေ .. ခင်ဗျားတို့ အနောက်ကမ္ဘာကြီး နည်းပညာတိုးတက်လာတာ အံ့မခန်းပဲဗျာ …။ နည်းပညာနောက်မှာပဲ လူတွေလည်း အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်အတပ်ခံရပြီး တေ့ဖြုတ်ခံနေရတယ် …။ ခင်ဗျားတို့ မူရင်းကမ္ဘာမှာရှိတုန်းက ..လက်တဆုပ်စာ လူတစုက ဗြောင်လုပ်တယ် …။ ခုလက်ရှိနေထိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီဒုတိယကမ္ဘာက လက်တဆုပ်စာလူတစုက တိတ်တဆိတ်လုပ်တယ် …။ ခုတော့ Clash of the privatization ပေါ့ဗျာ …။ လူမိသွားရင်တော့ lady & Gentleman ဆိုပြီး အရှက်ပြေ ..လေပြည်ထိုးမယ်ပေါ့ဗျာ …။
တကယ်ဆို ခုတလောတွေးမိတာက လူတစုတွေအကြောင်း …။ လူတစုကြောင့် ..လူတအုပ် ဒုက္ခရောက်တယ် …။ လူတစုကြောင့် … လူတအုပ်က ဆန္ဒပြတယ် …။ လူတစုကြောင့် … လူတအုပ်ခမျာ .. ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်ကုန်တယ် …။ တကယ်ဆို ခင်ဗျားတို့လည်း လွတ်လပ်မှု ရကုန်ကြတာမှမဟုတ်ပဲကိုး …။ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေနောက်ကွယ်မှာ … ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို နဖားကြိုးထိုး ထိန်းချုပ်နေကြတာကိုး …။
ကျူပ်ထင်ပါတယ် …နဂိုကတည်းက သူတို့က ဆည်ဝကစောင့်တဲ့ ဗျိုင်းတွေကိုးဗျ …။ ဖား ငါး သားလောင်းလေးတွေ ပါလာလေးမလား ..ပါလာလေမလားနဲ့ …. ဂဏာန်းနဲ့တွေ့တော့ လည်ပင်းအညှပ်ခံရတာ ဆန်းတော့ မဆန်းဘူးဗျို့ …။
သတိထားတော့ဗျို့ … ခင်ဗျားတို့ဆီက ဒေတာအချက်အလက်တွေ ရသွားရင် တခြားဂြိုလ်သားတွေလို့ ထင်နေဦးမယ် …။ တကယ်လို့များ ရော်ဘဲကြီးတို့ရဲ့ ကျုပ်တို့အာရှတလွှားကို အလည်အပတ်လေးများ ရောက်ခဲ့မယ်ဆို … ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ သေချာ စစ်ဆေးပြီးတော့ လာခဲ့ကြဗျာ …။ တော်ကြာ ကျုပ်တို့ဆီက မဟုတ်မဟတ် တက္ကနစ်တွေ ခင်ဗျားတို့ ဒုတိယကမ္ဘာက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆီ ရောက်သွားမှဖြင့် …။
ရော်ဘဲကြီးတို့ရေ … နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်တာကို စိတ်မယူကြပါနဲ့ …။ သူတို့လည်း သူတို့ပြည်သူပြည်သား ..သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း အူမချေးခါး သိချင်ရှာမှာပေါ့ဗျာ …။ ကျုပ်တို့လို သာမန်ပုထုဇဉ်တွေတောင် … ဆီဒိုးနားကိစ္စဆို အွန်လိုင်းမှာ ပြူးပြဲပြီး ရှာလိုက် …။ ဟိုမင်းသမီးလေးဆို အွန်လိုင်းမှာ ပြူးပြဲရှာလိုက်ကြ …။ ဒီမင်းသမီးလေးဆို အွန်လိုင်းမှာ ပြူးပြဲရှာလိုက်ကြနဲ့ …။ တခါတလေများဗျာ ဒေါင်း တောင် ဒေါင်းထားမိသေးရဲ့ …။
စိတ်မရှိပါနဲ့ ရော်ဘဲတို့ …။